Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Famaranana ny fizahan-tany any Afrika Atsimo
sari-tany afrika atsimo
Ny filoha Matamela Cyril Ramapho avy any Afrika atsimo dia hanidy ny sisintanin'ny olom-pirenena rehetra avy amin'ny firenena Corononavirus izay ahiana hiharan-doza. Seranan-tsambo 35 sisintany no hakatona. Manomboka amin'ny Alarobia dia hikatona ihany koa ny sekoly rehetra atsy Afrika Atsimo.
Tamin'ny 13 martsa, ny birao fizahan-tany afrikanina any Pretoria, Afrika atsimo, dia nanolo-kevitra ny mpikambana rehetra sy ny firenena afrikana rehetra hanaraka ny maodely navoakan'ny Nepal na tsotra fidirana akaiky amin'ny fireneny ho an'ny olom-pirenena avy amin'ny firenena izay ahiana tratran'ny Coronavirus. Taorian'ity dia navoakan'i eTurboNews firenena maro aty Afrika no nanaraka mivantana na tsia ity torolàlana ity hiarovana ny ho avin'ny fizahantany any amin'ny kaontinanta.
Manana tranga 51 amin'ny COVID-19 i Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao, saingy 13 vao notaterina androany.
Isan'ny tranga manerana an'i Afrika dia notaterina tany amin'ny firenena 26 omaly, saingy mbola ambany ny isa amin'ny ankapobeny.
Araka ny naroson'ny Birao fizahantany afrikanina Fotoana izao hihetsika avy hatrany hiarovana ny rafi-pahasalamana marefo any amin'ny firenena afrikanina maro ary hiantohana ny fizahan-tany amin'ny ho avy fa tsy hiantehitra amin'ny tombony amin'ny fotoana fohy ary malalaka mandritra ny fotoana maharitra.
Andrasana ny pitsopitsony momba ny didy filoham-pirenena ho avy.